Video: Daw Aung San Suu Kyi @ Charity Concert for Assisting Education | Myanmar Celebrity Gossip & News
Video: Daw Aung San Suu Kyi @ Charity Concert for Assisting Education
Daw Aung San Suu Kyi makes an opening speech at the NLD's Charity Music Concert for assisting Education of Ethnic People which was held successfully on 30th December 2011 at Myanmar Convention Center (MCC) Hall, Yangon.
တိုင်းရင်းသားများ ပညာရေးရန်ပုံငွေ တေးဂီတဖျော်ဖြေပွဲမှ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ အဖွင့်အမှာစကား Video on Youtube!!!
CuteDecember 31, 2011 at 1:49 AMDaw Aung San Suu Kyi Speech Charity Music Concert I Watching so Happy.ReplyDeleterakhine heroDecember 31, 2011 at 2:55 AMပြည်ထောင်စုစိတ်ဓါတ်ဆိုတဲ့စကားလုံးကို စာရွက်ပေါ်မှာရေးရုံ၊ ပါးစပ်ကပြောရုံနဲ့ မလုံလောက်ပါဘူး...။လက်တွေ့မှာ တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့အခွင့်အရေး၊ အကျိုးစီးပွားကို မျှမျှတတရှိအောင် လုပ်သလား? မလုပ်ဘူးလား?တရားမျှတမှုရှိအောင် လုပ်ပေးနိုင်ရင်တော့ တကယ့် ပြည်ထောင်စုစိတ်ဓါတ် လို့ ခေါ်နိုင်ပါတယ်..။စဉ်းတောင်မစဉ်းစားပေးဘူးဆိုရင်တော့ ပြည်ထောင်စုစိတ်ဓါတ်တို့၊ ပြည်ထောင်စုနိုင်ငံတို့ ဘယ်လိုတည်မြဲနိုင်မှာလဲReplyDeleteMrDecember 31, 2011 at 5:23 AMစောက်ရူးရယ် မင်းပဲ စင်ပေါ်တက်လိုက်တော့။ဂေါက်တောက်တောက်နဲ့ အဆဲခံချင်ပြီနဲ့တူတယ်။မင်းရော အခုဘာလုပ်နေလဲ။ReplyDeleteyeeDecember 31, 2011 at 5:40 AMThanks May Su ! u r so great, we love uReplyDeleteThetDecember 31, 2011 at 7:16 AMပြည်ပရောက်တဲ့ ရခုိုင်တွေ ဗမာပြည်ကုို ပြန်ကုိုမလာတာ. သူတုို့ဒေသ ကောင်းစားရေး လုပ်တယ်လုို့ ကြားကုို မကြားဘူးဘူး။ အဲဒါကုို မပြောနဲ့ ရုိုဟင်ဂျာ ကိစ္စကုို ဗမာတွေက ဒေါသဖြစ်ပြီး ထုိုင်ဆဲနေတဲ့ အချိန် ရန်ကုန်မှာ သောင်းသိန်းချီ ရောက်နေတဲ့ ရခုိုင်တွေ ဆန္ဒပြဘုို့ခေါ်တော့ ၁၀ ယောက်တောင် ရှိရဲ့လား. တောက် ပြောရတာ ဒေါသထွက်တယ်။ReplyDeleteMinDecember 31, 2011 at 10:31 PMအိုး ကိုရခိုင် ဟီးရိုးရေ ခင်ဗျားတော်တော်လေးကို လိုနေသေးတာပဲReplyDeletetheingiJanuary 1, 2012 at 2:26 AMmay mother su be happy and healthy forever. i worry about mother su `s health.she always works hard for the country . But I felt mother su become thin day by day.How is her health? I really want to send directly to mother Su . I want to say her Don`t work hard so much for the country and take care of yourself more because you have already givenalot of precious power to all of the myanmar people . I love May Su.ReplyDeletetheingiJanuary 1, 2012 at 2:31 AMmay mother su be happy and healthy forever. i worry about mother su `s health.she always works hard for the country . But I felt mother su become thin day by day.How is her health? I really want to send directly to mother Su . I want to say her Don`t work hard so much for the country and take care of yourself more because you have already givenalot of precious power to all of the myanmar people . I love May Su.ReplyDeleteAi KoJanuary 1, 2012 at 2:48 AMမြန်မာပြည် ဒီမိုကရေစီရဖို့ဆိုတာက လိုအပ်ပါတယ် ဒါပေမဲ့ မြန်မာပြည်သားတိုင်းက ဒီမိုကရေစီ စံနှုန်းနဲ့ မထိုက်တန်သေးပါဘူးထင်ပါတယ် များစွားကြိုးစားရအုံမယ် မြန်မာပြည်အားလုံးအတူတူ ကြိုးစားရမယ်....ReplyDeletejustice loverJanuary 1, 2012 at 9:11 AMma aye loe"rakhine hero"mike yin htwat kae hayaung.ReplyDeletemyo layJanuary 9, 2012 at 5:42 PMcorrect ,, Justice lover ..ReplyDeletenay sanJanuary 11, 2012 at 9:23 AMnayspecial@gmail.com said... "United we stand,Divided we fall."I think...We are living same country.So,we should not be fight with same people.We must be discuss with together for our country future...???This is my idea....ReplyDeletepae youngJanuary 4, 2015 at 11:51 PMtiffany london sale A considerable cheap tiffany uk sale voice in cheap charm the ears, cheap reach for the glass tiffany london sale turned and looked at the woman chuckled lightly toast, woman smiled, lotus mouth slightly open, shallow drinkingacup tiffany london sale of wine. How did you tiffany jewellery uk sale escape, you're not afraid of it. cheap suddenly feltabit mean this woman, tiffany london sale began his dalliance with herReplyDeleteAdd commentLoad more...